Gịnị bụ Pay-Per-Pịa Marketing? Key Statistics Gụnyere! | Martech Zone
Ajuju nke ndi nwe ahia tozuru etozu na aju bu ma ha kwesiri ime ugwo-kwa-pịa (PPC) ahia ma obu na ha ekwesighi. Ọ bụghị a mfe ma ọ bụ mba ajụjụ. PPC na-enye ohere dị ịtụnanya ịkwanye mgbasa ozi n'ihu ndị na-ege ntị na ọchụchọ, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, yana weebụsaịtị ị nwere ike ị gaghị eru n'ụzọ nkịtị.
Gini bu ugwo onu ahia?
PPC bụ usoro mgbasa ozi n'ịntanetị ebe onye mgbasa ozi na-akwụ ụgwọ oge ọ bụla a pịrị mgbasa ozi ha. N'ihi na ọ chọrọ ka onye ọrụ mee ihe n'ezie, usoro mgbasa ozi a bụ ihe ama ama. Ndị na-ere ahịa nwere ike ịchọta ohere PPC gafee engines ọchụchọ, mgbasa ozi mmekọrịta, yana plethora nke netwọkụ mgbasa ozi. N'adịghị ka mgbasa ozi ọdịnala ndị a na-ebo CPM (ọnụ ahịa kwa puku echiche), PPC na-ebo CPC ebubo (ụgwọ kwa Pịa). CTR (pịa-site na ọnụego) bụ pasent nke ugboro ole ndị ọrụ pịa vestro hụ mgbasa ozi PPC.
Ikwesiri ime PPC? Ọfọn, m ga-akwado ịnwe ntọala Ọbá akwụkwọ ọdịnaya na website jiri mgbịrịgba niile na nkụja niile tupu ịmalite imefu ọtụtụ tọn na mgbasa ozi. Ihe pụrụ iche, n'ezie, ọ bụrụ na ị jighi n'aka ihe ọdịnaya ga-eweta ntụgharị. Nyocha ule na ntinye ederede na PPC nwere ike ịchekwa gi ego na oge ejiri ahia ahia ma oburu na ijighi n'aka.
M n'ozuzu nye ndụmọdụ ahịa iji nweta a ntọala saịtị, a n'ọbá akwụkwọ nke ọdịnaya, ụfọdụ oké ọdịda peeji nke, na ihe omume email… wee jiri PPC ka augment gị n'ozuzu dijitalụ ahịa azum. N'ime oge, ị nwere ike iwuli ndu ndu gị ma jiri PPC mee ihe mgbe ị chọrọ ndu.
Ihe omuma a site na SERPwatch.io, Steeti nke Lezienụ-Kwa-Pịa 2019, na-enye ọtụtụ ozi gbasara ụlọ ọrụ PPC, otu akụkụ si arụ ọrụ, ma na-agụnye oke ugwu metụtara.
Key PPC Statistics maka 2019
Afọ gara aga, Nchọpụta mgbasa ozi ọchụchọ Google toro 23%, mmefu mgbasa ozi ịzụ ahịa toro 32%, na ndenye ederede na-eto site na 15%.
Around 45% nke obere ulo oru na-etinyesi ego ike na PPC iji mee ka ọrụ ha dị elu.
Site na nyocha Google, mgbasa ozi ọchụchọ nwere ike mbo mbata mara site na 80%.
Nkwado mgbasa ozi weghaara 2 si 3 clicks na peeji mbu nke Google.
Mgbasa ozi ngosi Google ruru karịa 90% nke ndị ọrụ Internetntanetị n'ụwa nile.
N'ụzọ dị ịtụnanya, 65% nke ndị ahịa niile pịa site na njikọ nke ngwaahịa ụfọdụ.
Nsonaazụ ọchụchọ akwụghị ụgwọ na-ebute na nkezi nke 1.5 ugboro ntughari ọnụego nke rịzọlt nchọta.
Na 2017, ngwaọrụ mkpanaka mepụtara 55% nke mgbasa ozi ọchụchọ Google.
70% nke ndị na-enyocha ekwentị na-akpọ azụmahịa site na Google Search.
The nkezi pịa-site ọnụego na netwọk ọchụchọ bụ 3.17%. Ogologo CTR maka Nsonaazụ kachasị akwụ ụgwọ bụ 8%!
Jide n'aka na ị lelee ihe niile infographic n'okpuru maka ihe karịrị 80 ndị ọzọ ọnụ ọgụgụ!
Tags: ụgwọ kwa Pịactrkedu ka esi ppc mgbasa oziakwụ ụgwọ ọchụchọakwụ ụgwọ mgbasa ozi ọha na ezekwụọ ụgwọ kwa Pịappcppc ahịaserpwatch